Fandrefesana ny fifandraisan'ny mpanjifa amin'ny fotoana tena izy amin'ny alàlan'ny analytics amin'ny fitondran-tena amin'ny feo | Martech Zone
Vao nanoratra momba ny maha-zava-dehibe ny fotoana famaliana ary ny fotoana mety hamalian'ny ekipan'ny serivisinao na ny serivisy ho an'ny mpanjifa… ary niresaka momba ny kalitaon'ny valintenin'izy ireo ihany koa. Ahoana raha toa ka afaka mandrefy ny vokatry ny resadresakao amin'ny mpanjifanao ianao? Azo atao izany amin'ny Cogito Dialog.
Cogito Dialog dia manatsara ny fahombiazan'ny mpandraharaha mpanjifa amin'ny alàlan'ny fanolorana azy ireo amin'ny fitarihana fitondran-tena amin'ny fotoana tena. Ny Score Cogito Engagement dia manome fepetra mahomby sy azo antoka amin'ny kalitao amin'ny 100% amin'ny fifandraisana an-tarobia voafantina orinasa iray amin'ny mpanjifany.
Alao an-tsaina hoe afaka mahatsapa fahasosorana na fahafaham-po amin'ny fotoana tena izy ianao rehefa miresaka amin'ny prospect na mpanjifa! Izany no fampanantenan'ny fitondran-tena Analytics toa an'i Cogito. Ny fihetsik'i Cogito Analytics ny teknolojia dia niainga tamin'ny fikarohana tamin'ny alàlan'ny MIT Media Lab ary voaporofo izy ireo fa mahomby amin'ny alàlan'ny fametrahana ara-barotra maro.
Feon'olombelona - Data lehibe Analytics ampiharina amin'ny alàlan'ny algorithma manan-kery hanome alàlana ny famakafakana ny famoahana ny feon'ireo feo
Real-Time - Fanandramana ifandraisan'ny mpampiasa izay mitarika ny solontena hanitsy ny fomban'izy ireo hampifanaraka amin'ny safidin'ny mpanjifa
Isa - Ny Cogito Engagement Scores ™ dia manome fitantanana fepetra mazava tsara amin'ny fahombiazan'ny maso sy ny fahombiazan'ny fifandraisana
vinavina - Ny hevi-baovao avy amin'ny fifandraisana tsirairay dia mampahafantatra izay mety hataon'ny mpanjifa sy ny solontena manaraka
Results - Cloud based, intuitive ampiasaina ary fitambarana seamless amin'ny efa misy CRM sy telephony rafitra manafaingana fotoana hanome lanja
Cogito dia manome torolàlana momba ny fitondran-tena amin'ny mpampiasa solontenan'ny serivisy, ahafahan'izy ireo manatsara ny fomba fifandraisan'izy ireo, ary manangana fifandraisana matoky kokoa amin'ny mpanjifany. Ny rindrambaiko Cogito dia manome fahitana eo noho eo sy eo ho eo amin'ny haavon'ny fifandraisan'ny mpanjifa isaky ny fifandraisana an-telefaona. Io dia manome alalana ireo matihanina amin'ny telefaona hanome traikefa ho an'ny mpanjifa mahaliana kokoa sy be fiahiana, izay manatsara ny kalitaon'ny serivisy sy ny fahombiazan'ny varotra.
Tags: fitondran-tenafamakafakana fitondran-tenacogitodinika cogitoSerivisy ho an'ny mpanjifapeofamakafakana feofeofamakafakana ny feo